ဖုန်းလေး တစ်လုံး တည်း သာ အသုံးြ ပုပြီး သူ မ ကိုယ် တိုင် အစ အဆုံး ဖန်တီး ခဲ့တဲ့ ဗီ ဒီယို အ တိုလေး တစ်ပုဒ် ကို ပရိ သတ်တွေ ဆီ ချြ ပ လာ ခဲ့ တဲ့ ခြူးလေး – အနုပညာရပ်ဝန်း
ဖုန်းလေးတစ်လုံးတည်းသာ အသုံးပြုပြီး သူမ ကို ယ်တိုင် အစအဆုံး ဖန်တီး ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယို အတိုလေး တစ်ပုဒ်ကို ပရိသတ်တွေဆီ ချပြ လာတဲ့ ခြူးလေးဇာတ်လမ်းတွဲ မင်းသမီးလေး တစ်လက်ဖြစ်တဲ့ ခြူးလေးက “ပန်းနုသွေး”၊ “ပို၍လှသောမနက်ဖြန်”၊ “ပဥ္စလက်ရွာ”၊ “ချစ်ရပါသောနွေ”၊ “နွေလည်ညရဲ့လမင်း” စတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိလာ တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မတူညီတဲ့ ဇာတ်ရုပ် ကာရိုက်တာတွေကို အမျိုးမျိုးသရုပ်ေ ဆာင် နိုင်တဲ့ခြူးလေးက ဒီဘက်ခေတ်ရဲ့ အနုပညာကဝေမလေး လို့တောင် တင်စားလို့ရပါတယ်။ခြူးလေးကလည်း သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ မရိုးနိုင်တဲ့ အနုပညာ အသစ်တွေကို ချပြဖို့ ကြိုးစားနေသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ ခြူးလေးက ဖုန်းလေး တစ်လုံးတည်းသာ အသုံးပြုပြီး သူမကိုယ်တိုင် အစအ ဆုံးဖန်တီးခဲ့တဲ့ ဗီဒီယို အတိုလေးတစ်ပုဒ်ကို ပရိသတ်တွေကို ချပြလာပါတယ်။ခြူးလေးက “သင်တန်း တက်ခဲ့စဉ်က Project – 1 ( Who am I ? ) ဖုန်းလေးနဲ့ ဘဲ အစဆုံး ကိုယ်တိုင် ဖန်တီး ခဲ့ပုံလေး ပါပေါ့ … နောက်ခံ တီးလုံးလေး အကြိုက်ဆုံး ….” ဆိုပြီး သူမ ကိုယ်တိုင် အစအဆုံးဖန်တီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို အခုလိုပဲ မျှေ ဝပေး လာပါတယ်။
ခြူးလေးကတော့ ပရိသတ်တွေအတွက် အသစ်အသစ်သော အနုပညာတွေကို ချပြနိုင်ဖို့အတွက် အားသွန်ခွန်စိုက်ကြိုးစားနေသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်း ခြူးလေးရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီး သဘောကျကြမယ်လို့ ထင် ပါ တယ်။ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းေ ပးလိုက်ပါတယ်နော်။credit
သင်တန်း တက်ခဲ့စဉ်က Project – 1 ( Who am I ? )ဖုန်းလေးနဲ့ ဘဲ အစဆုံး ကိုယ်တိုင် ဖန်တီး ခဲ့ပုံလေး ပါပေါ့ … နောက်ခံ တီးလုံးလေး အကြိုက်ဆုံး ….Chue Chue
Posted by Chue Lay on Friday, 31 July 2020